टान निर्वाचन अक्टोबर २८ मा, सिजनमा नगर्न व्यवसायीको आग्रह | .:: Welcome || Paryatannews
Home » :: हाईलाइट समाचार » टान निर्वाचन अक्टोबर २८ मा, सिजनमा नगर्न व्यवसायीको आग्रह
टान निर्वाचन अक्टोबर २८ मा, सिजनमा नगर्न व्यवसायीको आग्रह
पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ् नेपाल (टान)ले आगामी अक्टोबर २८ गते निर्वाचन तथा साधारणसभा गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार बसेको टान कार्यसमिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको टानका महासचिव कर्ण लामाले बताए ।
संघको ३९औं वार्षिक साधारणसभासँगै नयाँ नेतृत्वका लागि हुन लागेको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै व्यवसायीहरुले भने निर्वाचन सार्न आग्रह गर्न थालेका छन् । मुख्य पर्यटकीय सिजनमा घोषणा गरिएको निर्वाचनमा अधिकांश व्यवसायीहरु उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाएका छन् ।
टान निर्वाचन अक्टोबर २८ मा, सिजनमा नगर्न व्यवसायीको आग्रह Reviewed by Shiva Shrestha on Oct 10 . पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ् नेपाल (टान)ले आगामी अक्टोबर २८ गते निर्वाचन तथा साधारणसभा गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार बसेको टान कार्यसमि पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ् नेपाल (टान)ले आगामी अक्टोबर २८ गते निर्वाचन तथा साधारणसभा गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार बसेको टान कार्यसमि Rating: 0